Iindaba - Ngokubanzi Izicelo zokupholisa iNqaba
Ngokubanzi Izicelo apholisayo Tower
Iinqaba zokupholisa zisetyenziselwa ukufudumeza, ukungena komoya, kunye nomoya (HVAC) kunye neenjongo zeshishini. Inika ukusebenza ngokungaxabisi nangokusetyenziswa kwamandla kweenkqubo ezifuna ukupholisa. Ngaphezulu kwe-1500 yezixhobo zorhwebo zisebenzisa isixa esikhulu samanzi ukupholisa izityalo zazo. Iinkqubo ze-HVAC zisetyenziswa ikakhulu kwizakhiwo ezinkulu zeofisi, ezikolweni nasezibhedlele. Iinqaba zokupholisa kwimizi-mveliso zinkulu kuneenkqubo ze-HVAC kwaye zisetyenziselwa ukususa ubushushu obufakwe kwiinkqubo zamanzi okupholisa ezijikelezayo ezisetyenziswa kwizityalo zamandla, izinto zokucoca i-petroleum, izityalo zepetrokhemikhali, indawo yokulungisa igesi yendalo, indawo yokulungisa ukutya kunye namanye amaziko emizi-mveliso.
Iinkqubo zorhwebo kunye noomatshini bavelisa ubushushu obuninzi kangangokuba ukusasazeka okuqhubekayo kuyimfuneko ekusebenzeni kakuhle. Ubushushu kufuneka bube kwindalo esingqongileyo. Oku kungenxa yenkqubo yokutshintshiselana ngobushushu nesiseko setekhnoloji yokupholisa inqaba.
Kuyathakazelisa ukuba ngaphandle kokupholisa iinqaba zizixhobo ze-20th Inkulungwane, ulwazi malunga nabo lilinganiselwe. Abanye abantu bakholelwa ekubeni iinqaba zokupholisa ziyimithombo yongcoliseko, kodwa ekuphela kwento abayikhupheleyo emoyeni ngumphunga wamanzi.
Emva kweminyaka emininzi yophuhliso lwale teknoloji, iinqaba zokupholisa ziyafumaneka kwiindidi ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Nganye yezi zinto zisebenza kulungelelwaniso oluthile lomthwalo, isizathu sokuba kubalulekile ukucacisa ukhetho olukhoyo. Qaphela ukuba ngaphandle koyilo olwahlukileyo, umsebenzi osisiseko uhlala njengowokuchitha ubushushu kwinkqubo yokwakha okanye inkqubo ukuya emoyeni ngomphunga. Nazi ezinye iindidi:
A.Uyilo loomatshini bokupholisa uyilo
B.Inqaba yokupholisa yomoya
C.Uyilo lokupholisa uyilo lweHybrid
D epheleleyo.Ukuhamba komoya okuphawuleka kwinqaba yokupholisa
Ewe.Ukwakhiwa okuphawulweyo kwinqaba yokupholisa
F.Imilo luphawu tower tower
G.Inqaba yokupholisa ngokusekwe kwindlela yokuhambisa ubushushu
Nganye kwezi inokuthwala iinqaba ezininzi zokupholisa. Umzekelo, ukwahlula iinqaba zokupholisa ngokweendlela zokudlulisa ubushushu kunika iindlela ezintathu: Iinqaba zokupholisa ezomileyo, Iinqaba zokupholisa zesekethe ezivuliweyo kunye neenqaba zokupholisa zesekethe ezivaliweyo / iinqaba zokupholisa amanzi.
Iinqaba zokupholisa mhlawumbi zibiza iindleko zokupholisa kwimizi-mveliso xa kuthelekiswa nezinye iindlela, kodwa umceli mngeni wokusebenza kakuhle unokuba kukuyekiswa. Ukubeka iliso kwinto yokusebenza kakuhle kubalulekile njengoko kuqinisekisa oku kulandelayo:
►Ukunciphisa ukusetyenziswa kwamanzi
►Ubomi benkonzo yezixhobo ezandisiweyo
►Ukunciphisa iindleko zokusebenza
Ukugcina inqaba yokupholisa isebenza ngokufanelekileyo, izinto ezintathu zibalulekile: ukuqonda uhlobo lwenqaba yokupholisa oyisebenzisayo, sebenzisa iikhemikhali ngokufanelekileyo kwaye ulandele ukulahleka kwamanzi kwenkqubo.
Inkqubo yenqaba yokupholisa ixhaphakile kumashishini amaninzi, eyintloko phakathi kwabo ingamandla, ezorhwebo, i-HVAC kunye noshishino. Kuseto lweshishini, inkqubo iyabugatya ubushushu oomatshini, inkqubo yokufudumeza izinto phakathi kweminye imithombo. Ngokukodwa, iinqaba zokupholisa kwimizi mveliso zixhaphakile kwiindawo zokulungisa ukutya, iindawo zokucoca i-petroleum, izityalo zegesi yendalo kunye nezityalo zepetroli.
Ezinye izicelo zeshishini:
►Amanzi apholileyo acofa amanzi
►Inaliti yeplastiki kunye nomatshini wokubumba
►Ukufa umatshini wokuphosa
►Isikhenkcisi kunye nesityalo esibandayo
►Inkqubo ye-Anodizing isityalo
►Isityalo sokuvelisa umbane
►Iinkqubo zokupholisa umoya opholileyo kunye noomatshini beVAM
Ukukhetha isisombululo sokupholisa luhlobo lokuqwalaselwa ngokubanzi kweendleko, indawo, ingxolo, iindleko zamandla kunye nokufumaneka kwamanzi. Ukuba awuqinisekanga ukuba yeyiphi imodeli oyifunayo, nceda unxibelelane nathi ukuze ufumane ukhokelo olukhululekileyo.